Firefox Preview 3.0 dia miaraka amin'ny fiarovana manokana, ny famafana tantara mandeha ho azy ary bebe kokoa | Ubunlog
Mozilla dia namoaka ny andiany fahatelo amin'ny fizahana fanandramana Firefox Preview, izay fantatra tamin'ny anarana kaody Fenix ​​teo aloha. Firefox Preview mampiasa motera GeckoView, natsangana tamin'ny alàlan'ny teknolojia Firefox Quantum ary andiam-boky famakiam-boky Android Mozilla, izay efa nampiasaina hananganana ny navigateur Firefox Focus sy Firefox Lite.
GeckoView dia karazany iray amin'ny motera Gecko, namboarina ho tranomboky misaraka izay azo havaozina tsy miankina, ary ny Android Components dia ahitana tranomboky misy singa mahazatra izay manome takelaka, fidirana feno, toro-hevitra fikarohana ary endri-pikarohana hafa.
Amin'ireo toetra mampiavaka azy nasongadina tao amin'ny Firefox Preview:
Fiarovana tsy misy fepetra amin'ny fanaraha-maso ny fihetsehana sy ny hetsika hafahafa isan-karazany.
Lisitry ny daholobe izay ahafahanao miditra amin'ny fikirana, tranomboky, pejy tianao, tantara, sintomina, takelaka nikatona vao tsy ela, safidio ny fomba fampisehoana tranokala, hikaroha lahatsoratra ao amin'ilay pejy, afindranao amin'ny maody manokana, sokafy tabilao vaovao sy fitetezana eo anelanelan'ny pejy.
Bara adiresy multifunctional izay manana bokotra iraisana ho an'ny asa haingana, toy ny fandefasana rohy mankany amin'ny fitaovana hafa ary manampy tranokala amin'ny lisitry ny pejy tianao.
Raha tokony hampiasa kiheba ianao, ny foto-kevitra momba ny fanangonana dia ahafahanao mitahiry, manangona ary mizara ireo tranonkala tianao indrindra. Aorian'ny fanidiana ny browser, ny takelaka misokatra sisa tavela ho vondrona iray, izay azo zahana sy hamerenana amin'ny laoniny.
Misy ny fiasan'ny fandefasana tab na fanangonana fitaovana hafa.
Endri-javatra vaovao lehibe an'ny Firefox Preview 3.0
Ao amin'ny kinova vaovao nampiana fitaovana mandroso amin'ny fiarovana amin'ny fanarahan-dia ny hetsika, izay, amin'ny alàlan'ny fampitahana amin'ny kinova desktop an'ny Firefox, dia manakana ny doka misy kaody momba ny fanarahan-dia ny hetsika, ny kaontera momba ny analytics an-tranonkala, ny widget an'ny media sosialy, ny fomba miafina momba ny mpampiasa ary ny kaody momba ny fitrandrahana cryptocurrency.
toerana misy anao, mavitrika maody, miaraka amin'ireny, raha ny filazan'ny mpamolavola, ny fampidirana ny hidin-trano dia mitondra any amin'ny hafainganam-pandehan'ny entana amin'ny 20% eo ho eo. Ao amin'ny tranokala rehefa voakitika ny sary masina miaraka amina sary miaro, ny varavarankely misy fampahalalana momba ireo zavatra voasakana dia manokatra miaraka amin'ny fahafaha-mijery ny lisitr'ireo sakana ho an'ny tranokala amin'izao fotoana izao.
Ankoatry ny, amin'ny alàlan'ny default, ny safidy dia manokatra rohy ivelany (manaraka rohy fampiharana an'ny antoko fahatelo) amin'ny fomba manokana.
Zava-baovao iray hafa miavaka amin'ity kinova vaovao ity nyary nanampy safidy hanafoanana ny tantara pejy manokatra rehefa mivoaka ny browser.
Nanampy koa ny fahafaha-misafidy ireo karazana fampahalalana haparitaka eo anelanelan'ny fitaovana. Avy amin'ny fampahalalana ho an'ny fampifanarahana, ny maripeo sy ny pejin'ny pejy fanokafana ihany no hatolotra.
Etsy ankilany, miharihary fa nampihatra interface iray aho hijerena sy hitantanana fampidinana. Ny satan'ny fampidinana dia aseho amin'ny alàlan'ny widget any amin'ny faritra fampandrenesana, izay ahafahanao mandalo ihany koa, manohy na manafoana ny fisintomana. Rehefa vita ny fisintomana dia miseho ny boaty fifampiresahana iray ahafahanao manokatra ilay rakitra alaina.
Amin'ireo fanovana hafa:
Raha tokony ho ny panel Quick Action, dia aroso ny fampiharana vaovao ny menio browser.
Nanampy ny fahaizana manampy motera vaovao hiditra amin'ny motera fikarohana.
Safidy no omena mba hamindrana ny bara fitetezana amin'ny farany ambany na amin'ny tampon'ny efijery.
Nanampy toe-javatra hametrahana ny haavon'ny zoom ho an'ny tranonkala rehetra.
Niampy toe-javatra ho an'ny filalaovana lalao an-tsarimihetsika video sy feo
Ato ho ato, ny famoahana dia havoaka amin'ny katalaogin'i Google Play (Android 5 na taty aoriana no ilaina amin'ny fampiasana) ny kaody azo jerena ao amin'ny GitHub.
Ny famotsorana maharitra voalohany dia andrasana amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2020. Aorian'ny fanamafisana ny tetik'asa sy fampiharana ny fampiasa efa kasaina rehetra, ny browser dia hisolo ny kinova Android an'ny Firefox, izay naato ny famoahana azy toy ny Firefox 69.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » General » Android » Firefox Preview 3.0 dia miaraka amin'ny fitomboan'ny fiarovana manokana, ny famafana ny tantara mandeha ho azy sy ny maro hafa
Navoaka ny kinova Pale Moon 28.8 vaovao, fantaro ny vaovao